4 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VACGF 2000 လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း-တစ်နာရီတွက် ဘူးပုလင်းပေါင်း ၂၀၀၀(၅၀၀ မီလီလီတာ ဘူး)
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်:း-တစ်နာရီတွက် ဘူးပုလင်းပေါင်း ၂၀၀၀ (၅၀၀ မီလီလီတာ ဘူး)
အမြိုးအစားခှဲခွားထားသောနရော: ဖွညျ့စကျ၊ , ဘူးများကို ရေဖြည့်ပေးသောစက်
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VACGF2000
VACGF 20004in 1 Automatic bottle filling and capping machine - with4automatic steps integrated, the automatic PET bottle filling machine is made with exceptional quality and operation.
The machine is designed with the filling capacity of 2,000 PET bottles/hour.
VACGF 2000 is currently distributed by Viet An to both domestic and international market.
The product applies the most advanced technology with premium stainless steel material and is manufactured under strict monitoring process, meeting international standards. The VACGF 2000 product has long-term shelf life of above 15 years with 12-month warranty.
In present global scenario, application of science and technology is an indispensable requirement. It decides manufacturing productivity, product cost reduction, release of manpower, from which improving economic efficiency and product quality.
VACGF2000 automatic washing, filling, capping is indispensable and critically important to the bottled water manufacturers currently.
4 in 1 ဘူးတွေပုလင်းတွေကို လောင်းဖြည့်ပေးသောစက် VACGF 2000 မှာ အော်တိုအဆင့် ၄ ဆင့်ပါရှိပြီး PET အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်ကို ခြွင်းချက်အရည်အသွေးနဲ့ လုပ်ဆောင်မှုအနေဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
ဒီစက်ကို တစ်နာရီအတွင်း PET ဘူးပုလင်းပေါင်း ၂၀၀၀ ဖြည့်နိုင်အောင် ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။
VACGF 2000 စက်ကို Viet An ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်ပြီး ပြည်တွင်းမှာရော ပြည်ပမှာပါ တင်သွင်းဖြန့်ချီပါတယ်။
ဒီစက်ကို ပရီမီယမ်အစွန်းခံသံမဏိနဲ့အတူ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံးနည်းပညာနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီပြီး တင်းကြပ်တဲ့ မော်နီတာလုပ်ဆောင်ချက်အောက်မှာ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ VACGF 2000 စက်ရဲ့ ထားသိုနိုင်တဲ့သက်တမ်းက ၁၅ နှစ်အထက်ဖြစ်ပြီး အာမခံချက်က ၁၂ လဖြစ်ပါတယ်။
တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ သိပ္ပံနည်းပညာက အလွန်လိုအပ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီ သိပ္ပံနည်းပညာကို အသုံးချခြင်းက ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု၊ ကုန်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချမှု၊ လူအင်းအားလျှော့ချမှု စတာတွေကို အဆုံးအဖြတ်ပေးပါတယ်။
VACGF 2000 စက်က ယနေ့ခေတ်အခါမှာ ရေသန့်ဘူးလုပ်ငန်းတွေအတွက် အလွန့်အလွန် အရေးပါလာပါတယ်။
VACGF 20004in 1 Automatic bottle filling machine with numerous outstanding advantages
4 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VACGF 2000 ၏ ကောင်းကျိုးများ
This is one of the automatic filling machines genuinely imported by Viet An It applies the most advanced technology of pet bottle filling in 2021. The product is distributed, installed by Viet An company.
With additional innovative technical improvement,4in 1 automatic bottle filling and capping machine- VACGF2000 has been highly appreciated by both domestic and international manufacturers.
ဒီစက်က Viet An ကုမ္ပဏီမှ တင်ပို့တဲ့ စစ်မှန်တဲ့စက်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်ရှေ့ပြေးတဲ့ pet ဘူးတွေပုလင်းတွေလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒီစက်ကို Viet An ကုမ္ပဏီမှ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပြီး တပ်ဆင်ပေးပါတယ်။
နည်းပညာတိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ VACGF 2000 စက်ကို ပြည်တွင်းပြည်ပ ထုတ်လုပ်သူတွေက အသိအမှတ်ပြုကြပါတယ်။
1. Supplied by Viet An - the best brand in Vietnam
Viet An ကုမ္ပဏီမှ တင်သွင်းသော-ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံး ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်
Viet An General Trading Joint Stock Company has been equitized since Aug/2009. We arealeading company in importing and distributing filling machines, bottle blowing machines, water filtration lines, manufacturing stainless steel ice machines, etc.
In the past 20 years, Viet An has been making unceasing efforts to improve our product quality as well as technical issues. Our brand has been built with our premium products and customers’ trust. Thus, Viet An has earnedavariety of prestigious awards for our unceasing efforts.
Viet An ကုမ္ပဏီကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လကတည်းက တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကုမ္ပဏီဟာ အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်များ၊ ရေဘူးမှုတ်စက်များ၊ ရေစစ်လိုင်းများ၊ အစွန်းခံသံမဏိ ရေခဲစက်စတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီတဲ့နေရာမှာ ဦးဆောင်နေပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ လုံး Viet An ကုမ္ပဏီက ပစ္စည်းတွေရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာတွေကို တိုးတက်အောင် မဆုတ်မနစ် ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်ဟာဆိုရင် ပရီမီယမ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Viet An ရဲ့ မဆုတ်မနစ်ကြိုးစားမှုတွေကြောင့် ဆုတံဆိပ်များစွာကိုလည်း ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Golden Lotus Cup - Vietnamese High-Quality Goods awards (2009)
Vietnamese best brand (2017)
And many other prestigious awards
Especially, Viet An has been honorably listed in “Top 100 Enterprises” to report achievements and pay New Year's visits to President Truong Tan Sang, President Tran Dai Quang at the President Palace.
Viet An commits to constantly distribute the premium filling lines at reasonable prices, satisfying diverse demands of the domestic and international customers.
အထူးသဖြင့် Viet An ကုမ္ပဏီဟာ သမ္မတ Truong Tang Sang နဲ့ သမ္မတ Tran Dai Quang တို့ကို သမ္မတအိမ်တော်မှာ နှစ်သစ်အလည်အပတ်သွားပြီး ဆုတံဆိပ်ရယူဖို့ လုပ်ငန်း ၁၀၀ ထဲမှာ စာရင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
Viet An မှ ပရီမီယမ်လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့လိုင်းတွေကို ဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ့ ဖြန့်ဖြူးပေးပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးမှာပါ။
2. Achieving ISO 9001:2015 Certification
ISO 9001:2015 တရားဝင်လက်မှတ် ရရှိခြင်း
As one of the most advanced filling machines in the marker, VACGF2000 applies the most innovative manufacturing technology of the United States with4automatic steps, improving productivity and saving labor cost. The entire production and assembly process ensures ISO 9001:2015 standard.
ဈေးကွက်မှာ ခေတ်ရှေ့ပြေးတဲ့ စက်တစ်ခု ဖြစ်တာနဲ့အညီ VACGF 2000 စက်ဟာ U.S ရဲ့ ခေတ်မီတဲ့ အော်တိုအဆင့် ၄ ဆင့်ကို အသုံးပြုထားပြီး ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေကာ အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအတွက် ISO 9001:2015 လက်မှတ်လည်း ရရှိထားပါတယ်။
Application of automatic botlle washing, filling, capping and anomaly inspection will help the manufacturers satisfy food hygiene and safety standards stipulated by the Ministry of Health.
အော်တိုသန့်ရှင်းခြင်း၊လောင်းဖြည့်ခြင်း၊အဖုံးတပ်ပေးခြင်းနဲ့ မူမမှန်မှုစစ်ဆေးပေးခြင်းစတဲ့ အော်တိုအဆင့် ၄ ဆင့်ကြောင့် ဝယ်ယူသူတွေအတွက် စားသောက်ကုန်ကို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စေပြီး ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့လည်း ကိုက်ညီမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
3. Less manpower required
Unlike other semi-auto filling products which requirealot of human resources, with this VACGF2000 automatic filling machine, only one operator is needed to program and start the machine. All other steps, including washing, filling and capping, are automatically operated.
လူအင်အားလိုအပ်တဲ့ တခြားတဝက်အော်တိုစက်တွေနဲ့ မတူဘဲ VACGF 2000 က ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်ပြီး စက်ကိုစတင်ဖို့ အော်ပရေတာတစ်ယောက်သာ လိုပါတယ်။ ဆေးကြောခြင်း၊လောင်းဖြည့်ခြင်းနဲ့ အဖုံးတပ်ပေးခြင်းတွေကို စက်ကအော်တိုလုပ်ဆောင်ပါတယ်။
4. A wide range of bottles to be filled
Manufacturingawide range of water bottles of various sizes will help to meet the diverse demands of the customers. Unlike the previous machines of old technology which can process filling specific bottles of 250ml, 300ml, 500ml or 1,000ml. with this VACGF 20004in 1 Automatic bottle filling machine, the customers can produce numerous types of bottles of different volume. What you need to do is just changing the washing, filling head and capping molds. Required time to change the molds take about 1 hour. Thus, you can conduct changing molds after every manufacturing shift to ensure productivity as well as working time.
ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ အရွာ်အစားမတူတဲ့ ရေဘူးအများကြီးကို ထုတ်လုပ်ချင်မှာ အသေအချာပါပဲ။ ယခင်နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့စက်တွေက 250 ml,300ml,500ml,1000ml တွေကိုသာ ထုတ်လုပ်နိုင်ပေမယ့် VACGF 2000 စက်က ထုထည်မတူတဲ့ သက်အမျိုးအစား အမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ ဆေးကြောပေးခြင်းခေါင်း၊ ဖြည့်ပေးခြင်းခေါင်းနဲ့ အဖုံးတပ်ပေးခြင်းခွက်တွေကိုသာ လဲပေးရမှာ ဖြစ်တယ်။ ပုံစံခွက်ကိုလဲဖို့က အချိန် တစ်နာရီလောက်သာ ကြာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်နဲ့ ထုတ်လုပ်မှုကို သေချာစေဖို့ ထုတ်လုပ်မှု တစ်လှည့်ပြီးတိုင်း ခွက်ကိုလဲပေးသင့်တယ်။
5. High capacity:
This product is unlike other semi-auto filling machines which requirealot of manpower with low productivity, With the application of modern technology into manufacturing and business activities, The4in 1 automatic filling machines provided by Viet An is equipped with 12 washing heads, 12 filling heads, 1 capping heads and 1 anomaly inspection machine. Therefore, with this machine, one operator can perform the work of 12 other operators.
ဒီစက်က လူအင်အားလိုပြီး ထုတ်လုပ်မှုနည်းတဲ့ ယခင်စက်တွေနဲ့ မတူညီပါဘူး။ ထုတ်လုပ်ခြင်းမှာ ခေတ်မီတဲ့ နည်းပညာကြောင့် Viet An ကထုတ်တဲ့ VACGF 2000 စက်မှာ သန့်ရှင်းပေးတဲ့ခေါင်း ၁၂ ခု၊ ဖြည့်ပေးတဲ့ခေါင်း ၁၂ ခု၊ အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ခေါင်း ၁ ခု၊ မူမမှန်မှုစစ်ဆေးပေးတဲ့စက် ၁ ခုတို့ ပါဝင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစက်နဲ့ အော်ပရေတာတစ်ယောက်က အော်ပရေတာ ၁၂ ယောက်စာ အလုပ်လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။
Who should use Viet An’s VACGF20004in 1 automatic filling machine
4 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက် VACGF 2000 ကို ဘယ်လိုလူတွေဝယ်သင့်လဲ
Application of science and technology to production and business activities is an indispensable trend in the era of national industrialization and modernization. Replacing manpower with automatic machines has contributed to ensuring productivity as well as reducing product prices, increasing competitiveness for the businesses.
That is the reason why all the bottled water and bottled cosmetic manufacturers are recommended to use this VACGF20004in 1 automatic filling machine.
တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ စက်မှုခေတ်ကြီးမှာ သိပ္ပံနည်းပညာအသုံးချမှုက အလွန်အရေးပါလာပါတယ်။ လူတွေအစား အော်တိုစက်တွေကို အသုံးပြုခြင်းက ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ကို လျှော့ချပေးတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်း ချဲ့ထွင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီအချက်ကတော့ ရေသန့်ဘူးလုပ်ငန်းတွေ၊ ဘူးလုပ်ငန်းတွေက VACGF 2000 စက်ကို အသုံးပြုသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ပါပဲ။
Technical specifications of VACGF20004in 1 automatic filling and capping machine
4 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက် VACGF 2000 ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
Below are4must-have steps ofaVACGF2000 automatic filling machine
• Automatic bottle washing
• Automatic bottle filling
• Automatic bottle capping
• Automatic anomaly inspection
အောက်ဖော်ပြပါများသည်4in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက် VACGF 2000 ၏ ဝယ်ကိုဝယ်ရမယ့် အဆင့်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
This4in 1 automatic bottle filling machine is also equipped with plastic conveyor to transfer the bottles to go through the automatic steps. In addition to above automatic steps, it is also recommended that the customers should equip one more bottle loading machine, one arranging machine and one membrane shrinking machine, Please refer below table for technical information.
ဒီအဆင့် ၄ ဆင့်ကို ဘူးတွေပုလင်းတွေရွှေ့ဖို့အတွက် ပလပ်စတစ်ရွေ့လျားစက်နဲ့ တွဲထားပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါ အော်တိုအဆင့်တွေအပြင် ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ ဘူးတွေပုလင်းတွေ သယ်ပေးတဲ့စက်တစ်ခု၊ ဘူးတွေပုလင်းတွေ စီပေးတဲ့စက်တစ်ခုနဲ့ အလွှာကိုရှုံ့ပေးတဲ့စက်တစ်ခု ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။
4 mandatory automatic steps integrated into VACGF2000
4 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက် VACGF 2000 တွင် နဂိုပါရှိပြီးသော အော်တိုအဆင့်များ
First step: Automatic bottle washing
The empty bottles will be transferred to this bottle washing machine. At the washing machine, the bottles will be thoroughly washed with high water pressure generated and sprayed from 12 automatic washing heads. The washing capacity of this machine is up to 2,000 bottles per hour. This automatic washing machine can replace one operator. This is the most effective solution to help the manufacturers improve productivity and save labor expenses, increasing competitiveness in the market. Meet food hygiene and safety standards.
ဘူးလွတ်တွေကို ဒီဘူးတွေဆေးပေးတဲ့စက်ဆီကို ရွှေ့ပေးရပါမယ်။ ဒီစက်မှာ ဘူးတွေကို ရေဖိအားများများနဲ့ ခေါင်း၁၂ ခုက ဖြန်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်က တစ်နာရီမှာ ဘူးပေါင်း ၂၀၀၀ ကို သန့်ရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို အော်ပရေတာ တစ်ယောက်နေရာမှာ အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက ထုတ်လုပ်သူတွေအတွက် ထုတ်လုပ်မှုများပြီး အကုန်အကျသက်သာစေရန်အတွက် အထိရောက်ဆုံးသော နည်းဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင် စီးပွားရေးတွေလည်း တိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ စားသောက်ကုန်လုံခြံမှုနဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်မှုတွေကိုလည်း သေချာစေပါတယ်။
Second step: Automatic bottle filling
အဆင့် ၂: အော်တို ဖြည့်ပေးခြင်း
After being completely cleaned, the jars will be transferred to the filling system with 12 filling heads used for plastic bottles. There will beamotor attached to this system to adjust the speed. This will help the manufacturers be more active in production process. The average filling capacity of this machine is 2,000 bottles per hour.
The bottles are transferred to the filling machine through the bottle holding mold system. At this machine, the 12 automatic bottle filling heads attached with sensor system will process filling water into the bottles according toaspecific volume programmed with the remote control. The bottles fully filled with water will be transferred to the capping machine through the bottle holding mold system.
သန့်ရှင်းပြီးတဲ့ ဘူးလွတ်တွေကို ဖြည့်ပေးတဲ့ခေါင်း ၁၂ ခုပါတဲ့ လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်ဆီကို ရွှေ့ပေးရပါမယ်။ ဒီစက်မှာ အရှိန်ကိုညှိပေးတဲ့ မော်တာပါရှိပါတယ်။ ဒီအချက်က ထုတ်လုပ်သူတွေကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစေမှာပါ။ ဒီစက်က ပျမ်းမျှ တစ်နာရီမှာ ဘူးပေါင်း ၂၀၀၀ ကို ဖြည့်ပေးနိုင်တယ်။ ဘူးတွေက မော်တာထည့်တဲ့ပုံစံခွက်ကိုဖြတ်ပြီး လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်ဆီကို သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်မှာ ဆင်ဆာစနစ်ပါရှိတဲ့ လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ခေါင်း ၁၂ ခုက ရီမုဒ်စနစ်ပါတဲ့ တိကျတဲ့ထုထည်ပရိုဂရမ်အတိုင်း ဘူးတွေကို ဖြည့်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြည့်ပြီးတဲ့ ဘူးတွေက ဘူးတွေထည့်တဲ့စနစ်ကိုဖြတ်ပြီး အဖုံးတပ်ပေးတဲ့စက်ဆီကို ရွှေ့ပေးရမှာ ဖြစ်တယ်။
Third step: Automatic bottle capping
အဆင့် ၃: အော်တို အဖုံးတပ်ပေးခြင်း
The bottle capping machine has one capping head made of steel and coated withapremium 204 stainless steel layer. Therefore, the machines is not rusty or corrosive, maintaining absolute safety and hygiene manufacturing process. There are balls attached inside the capping heads to ensure exact and prompt process of plastic bottle holding and capping.
အဖုံးတပ်ပေးတဲ့စက်က စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး ပရီမီယမ် 204 အစွန်းခံသံမဏိနဲ့ အလွှာဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် စက်က သံချေးမတက် ပျက်စီးယိုယွင်းမှုမရှိစေဘဲ လုံခြုံမှုရှိပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စေပါတယ်။ စက်ခေါင်းရဲ့အတွင်းမှာ ပလပ်စတစ်ဘူးတွေကို အဖုံးတပ်ပေးတါသေချာစေရန် ဘောလုံးလေးတွေ ကပ်ထားပါတယ်။
Fourth step: Anomaly inspection machine
အဆင့် ၄: အော်တို မူမမှန်မှု စစ်ဆေးပေးခြင်း
There is an inspection light integrated into the anomaly inspection machine. The light is designed for the purpose of detecting strangle objects in the products. The operators need to check carefully to reject unqualified products. The accuracy of the machine is up to 99.9%.
With4automatic steps integrated, this VACGF2000 automatic bottle filling machine will help the manufacturers reduce 3-5 operators. This isaperfect solution to save labor and manufacturing expenses in current period.
မူမမှန်မှု စစ်ဆေးပေးတဲ့စက်မှာ မီးတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ အလင်းရောင်ကိုတပ်ဆင်ရတဲ့ ရည်ရွာ့ချက်က ပုလင်းထဲမှာရှိတဲ့ မူမမှန်တဲ့ အရာတွေကို စစ်ဆေးဖို့ပဲ ဖြစ်တယ်။ အော်ပရေတာတွေက အရည်အသွေးညံ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဖယ်ရှားဖို့ ဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီစက်ရဲ့ မှန်ကန်မှုက ၉၉.၉% အထက် ဖြစ်ပါတယ်။
အော်တိုအဆင့် ၄ ဆင့်ကြောင့် ထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ အလုပ်သမား ၃ ယောက်ကနေ ၅ ယောက်ထိ လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်ကတော့ ယခုလက်ရှိအချိန်မှာ အလုပ်သမားလျှော့ချဖို့နဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေ ခြွေတာဖို့ အကောင်းဆုံးသော ဖြေရှင်းနည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
1. VALS4000 bottle loading and arranging machine
Bottle loading and arranging machineVALS 4000 ဘူးတွေသယ်ပေးပြီး စီပေးသောစက်
Automatic bottle loading
Automatic bottle arranging (in correct direction)
VALS 4000 ဘူးတွေသယ်ပေးပြီး စီပေးသောစက်
(VALS 4000 ဘူးတွေသယ်ပေးပြီး စီပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
2. Heat membrane shrinking machine - made in Vietnam
Heat membrane shrinking machineHeat membrane shrinking machine: Includes3main parts Vacuum chamber, conveyor belt and control panelVacuum chamber:
+ Be designed with opposite heating bars, evenly divided into upper and lower truss.
+ There are fans to accelerate the process of heating, dissipate heat and cool the membrane quickly before it is pushed out.
အပူဖြင့်ဘူးအလွှာကိုရှုံ့ပေးသောစက်-ဗီယက်နမ်ထုတ်ဒီစက်မှာ လေဟာနယ်အကန့်၊ ရွေ့လျားစက်ခါးပတ်နဲ့ ထိန်းချုပ်ဘောင်တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ လေဟာနယ်အကန့်:အပူပေးတဲ့ဘားတွေကို ဆန့်ကျင်ဘက် အပေါ်အောက်ထားပြီး ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ဒီစက်မှာ အပူပေးခြင်း၊ ရေဘူးအလွှာများအား ပုံမပျက်မီ အအေးခံခြင်းတို့အတွက် ပန်ကာလေးတွေ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
Includes stainless steel bars connected together to transfer the bottles to be wrapped in, make them go through the vacuum chamber and push them out in just some moments
ဘူးတွေကို ထုတ်ပိုးဖို့ ရွှေ့ပြောင်းရန်နဲ့ လေဟာနယ်အကန့်ကိုဖြတ်ပြီး ထုတ်ဖို့ ဒီစက်မှာ အစွန်းခံသံမဏိဘားတွေကို အတူတူ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
Parameter adjustment panel:
• Includesaswitch, conveyor speed adjustment buttons.
• Switch, buttons to adjust2separate heaters
• ခလုတျတဈခုနဲ့ ရှလြေ့ားစကျအရှိနျထိနျးညှိတဲ့ ခလုတျတှေ ပါဝငျပါတယျ။
- Wrap the bottles
- Help to preserve water bottle better, avoiding wet situation
• ဘူးတွေကို တစ်ပါကင်လျှင်
• စိုစွတ်မှုကိုရှောင်ကြဉ်ပြီး မူလအခြေအနေမှာ ထိန်းထားပေးတယ်။
Technical specification of Heat membrane shrinking machine - made in Vietnam
(အပူဖြင့်ဘူးအလွှာကိုရှုံ့ပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ-ဗီယက်နမ်ထုတ်)
Capacity (cap/h) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 1000-2000
Power capacity (kw/h) ပါဝါ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 12
Size (LxWxH) (mm) အရွယ်အစား "1220x500x1500"
Weight (Kg) အလေးချိန် 38
Notes when using VACGF20004in 1 automatic filling machine
VACGF 2000 စက်ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ မှတ်သားသင့်သည်များ
+ The VACGF20004in 1 automatic filling machine must be operated with 380v power supply. Thus, if the power supply is inadequate, the initial productivity might not be ensured.
+ There isaLED screen in the control panel showing the parameters set on the machine as well as the actual operating capacity of the machine.
There isa"Speed" button on the control panel, under the Led screen: This button is used to adjust the filling capacity of the machine. You can adjust the operating speed of the machine with this button. However, please note that the maximum capacity is 2,000 pet bottles per hour.
+ To ensure maximum performance, the customers need to ensure adequate installation area. Viet An has designed the layout of the VACGF2000 filling machine for the customers to refer.
+ VACGF 2000 စက်ကို ပါဝါ 380 v နဲ့ လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ ဒါကြောင့် ပါဝါအားနည်းမယ်ဆိုရင် ပထမဆုံးထုတ်ကုန်အတွက် မသေချာပါဘူး။
+ စက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်တွေနဲ့ စက်ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို့ကြည့်ဖို့ ထိန်းချုပ်ဘောင်မှာ LED စခရင် ပါရှိပါတယ်။LED စခရင်အောက်မှာရှိတဲ့ ထိန်းချုပ်ဘောင်မှာ Speed ဆိုတဲ့ခလုတ် ပါရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီခလုတ်က လောင်းဖြည့်ခြင်းအရှိန်ကို ထိန်းညှိဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အရှိုန်ကိုလည်း ဒီခလုတ်နဲ့ ထိန်းလို့ရပါတယ်။ မှတ်ထားရမှာက အမြင့်ဆုံး ပက်ဘူးတွေထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းက တစ်နာရီမှာ ဘူး ၂၀၀၀ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
+ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ချင်ကို လိုချင်တ်ာဆိုရင် ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ တပ်ဆင်တဲ့နေရာ အကျယ်ကြီးရှိဖို့ လိုပါတယ်။ Viet An မှ ဝယ်ယူသူတွေကို ညွှန်းဆိုဖို့ VACGF 2000 စက်ကို ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။
Problems that may be encountered when using the VACGF2000 filling machine
VACGF 2000 စက်ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ ကြုံတွေ့ရမည့် ပြသနာများ
During the operation you may encounter some problem as follows:
+ Bottle jamming
+ The water amount filled in the bottle does not match the required volume
+ The bottle caps are inverted, resulting inadequate efficiency of the capping process.
စက်က လုပ်ဆောင်နေစဉ်မှာ အောက်ပါပြသနာတွေ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
+ ဘူးတွေ ပြွတ်သိပ်ခြင်း
+ ဘူးထဲမှာရှိတဲ့ရေက လိုအပ်တဲ့ပမာဏနဲ့ မကိုက်ညီခြင်း
+ အဖုံးတွေ ဇောက်ထိုးမိုးမြှော်ဖြစ်ခြင်း၊အဖုံးတပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် လိုအပ်သလောက် မဖြစ်ခြင်း
Bottle jamming: The main reason for bottle jamming derives from improper mold fitting. Incorrect mounting of mold size. This problem is mainly due to the technician’s mistakes during installation process.
The water amount filled in the bottle does not match the required volume The main reason is that you have not correctly programmed or you have installed the filling heads improperly.
ဘူးတွေပြွတ်သိပ်ခြင်း: ဘူးတွေပြွတ်သိပ်ခြင်း ဖြစ်စေတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရာကတော့ ပုံစံခွက် စနစ်မကျခြင်းကြောင့် ဖြစ်တယ်။ ပုံစံခွက် အရွယ်အစားမှားနေခြင်းကြောင့်ပါ။ ဒီပြသနာကတော့ တပ်ဆင်ပေးတဲ့ နည်းပညာရှင်ရဲ့ အမှားပဲ ဖြစ်တယ်။
ဘူးထဲမှာရှိတဲ့ရေက လိုအပ်တဲ့ပမာဏနဲ့ မကိုက်ညီခြင်း: ဒီအချက်ကတော့ ဝယ်ယူသူအနေနဲ့ ပရိုဂရမ်သေချာမလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြည့်ပေးတဲ့စက်ကို စနစ်တကျမတပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တယ်။
The bottle caps are inverted: This problem is caused when you pull all the caps into the tray. However, as the tray is manually installed without blowing system to blow the caps into the cap duct connected to the capping heads. To limit this situation, you should haveacompetent supervisor and operater.
To completely remove this problem, you can install an additional automatic bottle cap loading machine. However, this solution is less chosen due to its high expense.
အဖုံးများ ဇောက်ထိုးမိုးမြှော်ဖြစ်ခြင်း: ဒီအချက်က အဖုံးတွေကို ဗန်းထဲကနေယူတဲ့အခါ ဖြစ်တတ်ခြင်းပါ။ အဖုံးတွေကို အဖုံးတပ်ပေးတဲ့စက်နဲ့ ချိတ်ထားတဲ့ပြွန်ထဲရောက်အောင် မှုတ်ပေးတဲ့ လေမှုတ်စက် မရှိရင်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို ဖြေရှင်းဖို့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အကြံပေး သို့မဟုတ် အော်ပရေတာတစ်ယောက် လိုပါတယ်။
ဒီပြသနာကို လုံးဝဖြေရှင်းချင်ရင်တော့ အော်တိုအဖုံးသယ်ပေးတဲ့စက်ကို ဝယ်တပ်သင့်ပါတယ်။သို့သော်လည်း ဈေးကြီးတဲ့အတွက် ဒီဟာကို သိပ်မရွေးကြပါဘူး။
Technical specifications of - VACGF20004in 1 automatic filling machine
(4 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VACGF 2000 ၏
A. VACGF2000 FILLING MACHINE -4MUST -BUY ITEMS
Cleaning head(သန့်ရှင်းရေးခေါင်း) 12
Extraction head(ထုတ်ယူသောခေါင်း) 12
Capping heads(အဖုံးတပ်သောခေါင်း) 1
Capacity (350ml bottles/h)(လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 1,500-2,000
Capacity (500ml bottles/h)(လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 1,500-2,000
Capacity (1,500ml bottles/h)(လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 600-1,000
Bottle size(ဘူးအရွယ်အစား) Φ55-Φ100
Bottle height(ဘူးအမြင့်) 100-320
Electricity supply(လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့ပေးမှု) 380v-50hz
3 in 1 Dimension (3 in 1 အတိုင်းအတာ) 3050*1100*1900
Weight (အလေးချိန်) 1,160
Anomaly inspection machine(မူမမှန်မှုစစ်ဆေးပေးတဲ့စက်) 600*200*1000
Plastic conveyor(ပလပ်စတစ်သယ်ယူကိရိယာ) 6000
B. AUTOMATIC STEPS (PURCHASE SEPARATELY) TO BE INTEGRATED INTO VACGF20004IN 1 FILLING MACHINE
VACGF 20004in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ သီးခြားဝယ်ယူနိုင်သော အဆင့်များ
Model Price (USD)(ဈေးနှုန်း)
1. VALS4000 bottle loading and arranging machine(VALS 4000 ဘူးတွေကို သယ်ယူပေးပြီး စီပေးတဲ့စက်)
2. VAHS2000 Heat membrane shrinking machine(VAHS 2000 အပူဖြင့်ဘူးအလွှာကိုရှုံ့ပေးသောစက်)
Hỏi đáp & đánh giá4in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VACGF 2000